Soo-saareyaasha Qalabka Ultrasonic Lab - Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha Shaybaarka Shiinaha
Qalab kala duwan ayaa buuxiya shuruudaha tijaabada ee kala duwan. Marka lagu daro qaybo xirashada, mashiinka oo dhan waa la damaanad qaaday 2 sano.
1500W qalabka firidhsan ee nanoparticles
Qalabkan waxaa loo isticmaali karaa kala firdhinta, yaraynta cabbirka walxaha, si isku mid ah xallinta xalalka, xasilinta xalalka ganaaxa, daaweynta dusha walxaha, iwm.
1500W sheybaarka nanomaterials homogenizer
Qaybaha xalka ayaa si weyn loo yareeyay, taas oo faa'iido u leh hagaajinta isku midnimada iyo xasilloonida xalka isku dhafan. Tayada qalabku waa mid deggan, dammaanad 2 sano ah iyo taageero farsamo oo dhan.